KMS 2021 — Momba Anay
Inona moa ny KMS?
Ny Kônferansa Momba ny Soratra (KMS) dia sehatra iray natao ihaonan'ireo mpanoratra, mpikaroka, mpandraharaha, mpitia sy mpandala, ary mpampiasa ny asa soratra amin'ny teny Malagasy. Tanjona ny hahafahan'ny rehetra mifanakalo hevitra, mifampizara traikefa, milaza vaovao, ary mifanome sosokevitra hanatsarana ny tontolon'ny asa soratra sy ny fanoratana amin'ny ankapobeny.
Ho tontosaina ny 7 Nôvambra ao amin'ny restaurant Haitsiron'Iarivo, Antananarivo, ny andiany fahefatra (KMS 2021) amin'ny Kônferansa Momba ny Soratra. Ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT) azyno mikarakara ny KMS.
Lohahevitra mifandraika amin'ireto ambany ireto no velabelarina sy ifanakalozan-kevitra mandritra ny kônferansa (santionany ihany ireto):
asa soratra malagasy sy ny fanatontoloana,
asa soratra sy ny teknôlôjia vaovao toy ny Aterineto, Facebook, Wordpress, sns.,
teknika sy torohevitra fomba fanoratra sombintantara, tononkalo, tantara foronina, tantara ho an'ny ankizy, angano, asa soratra siantifika, asa soratra an-gazety, blaogy, sns.,
tsipelina sy ireo voambolana malagasy vaovao,
fandinihana ny asa soratr'ireo mpanoratra malagasy malaza,
asa soratra sy ny fanotana boky,
tontolon'ny self-publishing, ebook,
Mpanoratra tantara fihaino. Voafidy ho mpanoratra malagasy mendrika indrindra tamin'ny taona 2019. Izy no mandrindra ny KMS 2021.
Sitraka Feno Tanteraka
Pôeta. Nanao velakevitra tamin'ny KMS 2018. Mpitsara lahatsoratra tamin'ny KMS 2019, ary mbola mpitsara amin'ny KMS 2021.
Mpiblaogy. Anisan'ireo nanao velakevitra tamin'ny KMS 2019. Ao anatin'ny ekipa mpitsara lahatsoratra amin'ny KMS 2021.
Mpanao slam. Anisan'ireo nanao velakevitra tamin'ny KMS 2018. Ao anatin'ny ekipa mpitsara lahatsoratra amin'ny KMS 2021.
Pôeta. Nanao velakevitra tamin'ny KMS 2018. Izy no nanndrindra ny KMS 2019. Mpitsara lahatsoratra amin'ny KMS 2021.
Pôeta. Izy no nandrindra ny KMS 2018. Anisan'ny mpikarakara tamin'ny KMS 2019. Mpitsara lahatsoratra amin'ny KMS 2021.
Mpanao gazety. Nanao velakevitra tamin'ny KMS 2017. Mpikambana efa ela tao amin'ny KHT. Mpikarakara ny KMS 2017, KMS 2018, KMS 2019, ary KMS 2021.
Infôrmatisianina. Izy no nanorina KHT. Izy koa no tompon-kevitra tamin'ny KMS. Mpikarakara ny KMS 2017, KMS 2018, KMS 2019, ary mbola mpikarakara amin'ny KMS 2021.
Mpikabary. Mpikambana mavitrika efa ela tao amin'ny KHT. Mpikarakara ny KMS 2017, KMS 2018, KMS 2019, ary mbola mpikarakara amin'ny KMS 2021.
Mpanohana sy Mpiara-miasa
Ireto ambany ireto daholo ny mpanohana sy mpiara-miasa amin'ny KHT amin'ny fanatontosana ny KMS 2021. Ankoatr'ireo dia maro dia maro ireo olon-tsotra sy fikambanana izay tsy mitonona anarana manohana sy miara-miasa aminay.
Raha maniry ny hanohana na hiara-hiasa aminay ianao dia tsindrio ilay bokotra ery ambany.
Momba ny KMS
Ny KMS dia kônferansa natao hiresadresahana momba ny tontolon'ny soratra sy ny fanoratana.
Copyright © Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | This template is made with by Colorlib